Waxaa laga mamnuucay raacida diyaaradaha Ogeysiiska 7: dhibaatooyinka ayaa sii socda | Wararka IPhone
Duulimaadyada adduunka oo idil waxay u midoobaan Galaxy Note 7
Wax aad u yar baa laga sheegay, oo qoran oo laga yiri moodeelkii ugu dambeeyay ee casriga ah ee Samsung soo saartay. Dhibaatooyinka saameeya baytariyadooda horayba waa loo ogaa, tani waa xaalad aad iyo aad u culus waxayna u horseedaa Kuuriyada Koonfureed dhibaato weyn. Go'aanka shirkaddu wuxuu ahaa inay laasho dhammaan boosteejooyinka ilaa hadda la iibiyay, dhaqdhaqaaq aan horay loo arag oo iyaga sababi doona
Milyaneerada khasaaray. Hadda, si aan u dhammeeyo dhammaantood, waa inay la macaamilaan shirkadaha diyaaradaha.
Waana in shirkadaha kala duwan ee u heellan daabulidda rakaabka ay diyaaraddu raalli ka yihiin oo aan doonaynin inay nasiibku tijaabiyaan oo ay la kulmaan qaraxa mid ka mid ah baytariyada aaladan diyaaradda saaran. Xaaladdan oo kale Xayiraadda saaritaanka diyaaradda oo ay ku qoran tahay lambarka 7 ee jeebkaaga ayaa si cabsi leh ugu faafaysa shirkadda Samsung iyo macaamiisheeda adduunka oo dhan. Xaaladaha qaarkood, mamnuucistu ma ahan mid aad u daran, taas oo u oggolaaneysa aaladda inay la socoto korantada la dansan yahay.
Waqtigaan la joogo, shirkadaha ku soo biiray qorshahan, si uun ama ha noqotee, waxay ahaayeen American Airlines, Delta Airlines, United Airlines, Quantas, Jetstar, Virgin Australia, Air France iyo Lufthansa, in kasta oo liistadu waxay u badan tahay inay koraan maalmaha soo socda. Sidaas ayaa ka dhalanaysa khilaaf xalin adag oo u dhexeeya shirkadaha diyaaradaha iyo tikniyoolajiyadda weyn ee Aasiya.
Marka waa xasaasi waa xilligan ay ku jiraan in bayaanka shirkadda ee ugu dambeeyay lagu boorriyay dhammaan milkiilayaasha Note 7 inay si dhakhso leh u soo celiyaan oo sii wad inaad isticmaasho taleefankoodii hore illaa beddelaad la soo bandhigi karo. Dhibaatada xun ee Samsung wali ma heysato dhammaad la qiimeyn karo dhowaan, waana inay u badan tahay inaysan jirin dariiqa ka xun ee lagu bilaabi karo terminal-dhamaadka-dheer ee dheer ee suuqa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Duulimaadyada adduunka oo idil waxay u midoobaan Galaxy Note 7
Aaway dhammaan baloogyada Android ee hadda hela wararka maalin kasta tan? Aaway kuwii aaminsanaa in Samsung ay summad wanaagsan astaan ​​tahay? Aaway warkii Antena 3 ee ka hadlaya "qarax" toddobaad dhan?
Haddii ay jirto kiis noocaas oo kale ah iphone waxay TV-yada ka bixin doonaan toddobaadyo iyo toddobaadyo. Sida aad u aragto in warbaahinta Isbaanishku yihiin dhillo yar oo lacag u shaqeeya.
Waad ku mahadsan tahay maqaalka, waxaan doonayaa inaan wax ka beddelo androidros-ka shaqadayda. Waxaa laga yaabaa in qof u raaco Nokia 3310 safarka shaqada ee soo socota x)
Sida laga soo xigtay KGI kamaradda laba-geesoodka ah waxay ku sii xirnaan doontaa moodeelka 'Plus'
iPhone 7 Plus iyo Samsung Galaxy S7 Edge fool ka fool, kala duwanaanshaha